CH3CHO + 1 / 2O2 → CH3COOH
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta CH3CHO + 1 / 2O2 . CH3COOH
CH3CHO waxay la falgashaa O2
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada CH3CHO + 1 / 2O2 . CH3COOH
etanoic acid methanol
(lng) (digo yara) (lng)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta CH3COOCH3 . CH3COOH + CH3OH
Waa maxay xaaladda falcelinta CH3COOCH3 ()?
Dhacdo ka dib CH3COOCH3 ()
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda CH3COOCH3, la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada CH3COOCH3 . CH3COOH + CH3OH
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta CH3COOCH3 ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3COOCH3 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3COOCH3 () falcelin ahaan?
CH3CHO + Crown3 → CH3COOH + Crown2
acetaldehyde trioxide chromium etanoic acid Chromium (IV) xabagta; CrO2
(lng) (rnn) (digo yara) (rnn)
(xoog leh) ( thẫm ) (xoog leh) (waa)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta CH3CHO + Crown3 . CH3COOH + Crown2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee CH3CHO (acetaldehyde) ee uu la falgalo CroO3 (chromium trioxide)?
Sida fal-celintu u dhici karto una soo saari karto CH3COOH (ethanoic acid) iyo CrO2 (Chromium(IV) oxide; CrO2)?
CH3CHO waxay la falgashaa CrO3
Dhacdada ka dib CH3CHO (acetaldehyde) waxay la falgashaa CroO3 (chromium trioxide)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Cro2 (Chromium (IV) oksaydh; CrO2), oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada CH3CHO + Crown3 . CH3COOH + Crown2
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3COOH (chromium trioxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3COOH (ethanoic acid) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Cro2 (chromium trioxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh chromium (IV) oxide;2) sida badeecada?